नेपाल ट्रष्टले यसै साता साता श्वेतपत्र जारी ग-यो। जग्गा अनियमिततामा आफ्नो नाम नमुछिने भएपछि छाति फुलाएर उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गरिदिए।
अघिल्लो आइतबार, काठमाडाैं जिल्ला अदालत, बिहानको ठीक ११ बजे। प्रहरी भ्यान टक्क रोकियो। कुन थुनुवाको पेसी रहेछ चासो हुने नै भयो।
पाँच रुपैयाँको किचेन र्‍याक
हेर्नोस् न धन कमाउने आइडिया पनि कति गज्जबको क्या ! कुशल इन्टरप्राइजेज कम्पनीले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वको निवासमा पाँच रुपैयाँमा सामान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएछ। त्यति मात्रै कहाँ हो र ?
डिम्पलको सिम्पल कुरा !
हेर्नुस्, कुरा बडो सिम्पल छ। त के सिम्पल छ भने जब तपाईं काम देखाउन सक्नुहुन्न र पनि क्रेडिट पाउनु छ भने त्यसका लागि राजिनामा दिइहाल्नुस्।
कसैको भाग्य पनि कस्तो ! थाप्लोमा यत्रो सभामुख आइपर्दा पनि झिनामसिना मुद्दाले झ्याउ लगाइरहन्छन्। नवनिर्वाचित सभामुखलाई मुखैमा आइपुगेको सभामुख पदमा बस्न नदेलान्झैँ अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो।
एउटा नमुना काम
हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिरको मनग्य चर्चा छ। चर्चा हो, उदयपुर जिल्लास्थित ‘बेलका’ नगरपालिकाको।
हिजोआज डिजिटल साँपसिँढीको खुब चल्तीमा छ। मोबाइलमा खेल्न मिल्ने साँपसिँढीको लोकप्रियता बढेसँगै केहीले राजनीतिलाई यही डिजिटल साँपसिँढी खेलसँग दाँज्न थालेका छन्। अब हेर्नुस् न, साँपसिँढी खेलझैँ कुनै व्यक्ति पुच्छरबाट एक्कासि शिखरमा पुग्छ अनि कोही शिखर चाहिँबाट स्वाट्टै पुच्छरमा झर्छ।
रावललाई धम्की ? हेप्नी ?
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र खरो प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिएका नेता भीम रावलले आफूलाई बालुवाटारमा बस्ने मान्छेबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको खुलासा गरे।
आफूले केही गर्न नसक्ने अनि पुर्खाको भजन गाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने नेपालीहरुको साझा समस्या हो। यो समस्याबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमेत कसरी जोगिन सक्थे र !
घाम छल्न छाता
पुस महिनाको चिसो मौसममा जनकपुरमा घाम र छाता एकै ठाउँमा देखिएछन्। न त गर्मी छल्न छाता निकालिएको हो, न पानी छल्न नै। चिसोमा राजनीतिक न्यानोका लागि छाता र घाम एकै ठाउँमा भेट भएका हुन्।
दुई गला, एक माला
हेर्नोस् न, यतिबेला नेपालको राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षको खोल ओढेको नेपाली कांग्रेस आफैं थला परेको अवस्था छ। प्रतिपक्ष नै थला परेपछि सत्तापक्षलाई हाइसञ्चो हुने नै भयो। नेपाली कांग्रेस नामको घरको भित्ता चिराचिरा परेका छन्।
यसै बर्ष एसईई उत्तीर्ण भएकी प्रतिनिधि सदस्य शान्ता चौधरीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
राज्यमन्त्रीलाई थप्पड उपहार
पुस १५ मा दुई नम्बर प्रदेशका राज्यमन्त्रीको गालामा सांसदले हत्केलाले स्पर्श ग-र्यो। स्पर्श मायालु थिएन, कडा थियो। अँ त्यसलाई थप्पड भन्छन्।
सपना त कडा देखाइएको हो हाम्लाई ! नत्र छुकछुके रेल र हुर्रिने पानीजहाजको कल्पना यसअघि कसले गरेको थियो र ! हुँदाहुँदा यी दुई वर्षमा पानीजहाज हुइँक्याउने र रेल छुक्छुक्याउने गीत घन्किएको निकै समय भइसकेको थियो।
मंसिरको शुभ मुहूर्तसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा चिप्लिएर पुगेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अन्ततः सत्ताबाटै चिप्लिए।